တိုယိုတာက Android ကား DVD, တိုယိုတာ Camry က Android ကား DVD, တရုတ်တိုယိုတာက Android 5.1.1 မော်တော်ကား DVD ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:တိုယိုတာက Android ကား DVD,တိုယိုတာ Camry က Android ကား DVD,တိုယိုတာက Android ကား DVD 5.1.1,တိုယိုတာက Android 4.2 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > တိုယိုတာက Android ကား DVD
တိုယိုတာက Android ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, တိုယိုတာက Android ကား DVD, တိုယိုတာ Camry က Android ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, တိုယိုတာက Android ကား DVD 5.1.1 R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
android ကားမျက်နှာပြင် Toyota Corolla 2019  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android toyota C-HR 2016 ကားအသံစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LC100 VXR 2005 အတွက်ကား DVD player နှင့် Android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CHR 2016 2018 ဘို့ 9inch ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Land Cruiser 2020 အတွက် octa core ကားမျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Toyota Prado 2017 အတွက် Android စတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Toyota Land Cruiser2020 အတွက်ပုံစံသစ်ကားသွားလာမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Avalon 2012 အတွက် Android head unit sim card  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Camry 2013 အတွက် dash navigation အတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CAMRY 2012-2013 အတွက် Klyde android ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde PX5 android 9.0 နှစ်ဆ din RAV4 2019-2020  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2016-2019 အတွက် Land Cruiser အတွက် Android ကားရေဒီယိုအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Camry 2019 အတွက် Android9ကားမာလ်တီမီဒီယာရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2016-2019 အတွက် Land Car Cruiser အတွက် Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိုယိုတာ Harrier 2016-2019 အတွက် Android auto multimedia  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Land Cruiser 2020 အတွက် Android 9.0 car dvd  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Toyota LC100 2005-2007 အတွက် Android9ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LC100 VXR 2005 အတွက် Android9ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2019 Corolla အတွက် Android system 10.1 "ကားသွားလာမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Toyota RAV4 2012-2015 အတွက် Android9ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
android ကားမျက်နှာပြင် Toyota Corolla 2019
Toyota Corolla 2019-2020 အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် ၁) Toyota Corolla 2019 အတွက်ကားဗီဒီယိုဖွင့်စက်သည် GPS Navigation ကိုထောက်ပံ့သည်။ ဂူးဂဲလ်မြေပုံကိုကြိုတင်တပ်ဆင်သည် (အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံအချက်အလက်မပါဘဲ); USB Port / Micro SD Slot (128GB...
Android toyota C-HR 2016 ကားအသံစနစ်
Toyota C-HR 2016-2018 အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် ၁) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC; subwoofer audio output ကို Support လုပ်ပြီးသီးခြားစီထိန်းချုပ်ပါ။ မျက်နှာပြင် resolution: 1024 * 600;...
LC100 VXR 2005 အတွက်ကား DVD player နှင့် Android
Toyota LC 100 VXR 2005-2007 အတွက် Android9PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9Pie System၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ Octa Core & 32GB / 64GB ROM၊...
CHR 2016 2018 ဘို့ 9inch ကားတစ်စီးရေဒီယို
toyota CHR 2016-2017 2018 အတွက် Android ကားရေဒီယိုစတီရီယို တိုယိုတာ CHR 2016 2017 2018 မော်ဒယ်အတွက် 1. ကို Android 10.0 ကားအညွှန်း - - ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ: ရရှိနိုင် 7dynamic backgrouds ။...
Land Cruiser 2020 အတွက် octa core ကားမျက်နှာပြင်
၂၀၂၀ toyota land cruiser အတွက် Android ကားရေဒီယိုစတီရီယို ၁။ Android 10.0 toyota land cruiser 2020 model အတွက်ကားသွားလာမှု။ - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံ - 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်သည်။...
Toyota Prado 2017 အတွက် Android စတီရီယို
Prado 2017-2019 အတွက် Android9PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9Pie System၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ Octa Core & 32GB / 64GB ROM၊...
Toyota Land Cruiser2020 အတွက်ပုံစံသစ်ကားသွားလာမှု
Toyota Land Cruiser 2020 အတွက် Android 9/10 PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9PIE စနစ်၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ SIX Core 32GB / 64G ROM၊ Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz), နှင့် Bluetooth Bluetooth6...
Avalon 2012 အတွက် Android head unit sim card
Avalon 2012 အတွက် Android head unit sim card Avalon car dvd နှင့် navigation system သည်စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ လာမည့်သီချင်းကိုကျော်။ အသံပမာဏကိုညှိပါသို့မဟုတ်အခြားချန်နယ်တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ။ Avalon car dvd နှင့် navigation...
Camry 2013 အတွက် dash navigation အတွက်
၂၀၁၃ - ၂၀၁၃ Camry အတွက် dash navigation အတွက် Klyde double din android head unit သည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 system နှင့် Octa Core CPU 4GB RAM ကိုအခြေခံထားသဖြင့်သင်သည်လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာလည်ပတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။...
CAMRY 2012-2013 အတွက် Klyde android ကားအသံ
CAMRY 2012-2013 အတွက် Klyde android ကားအသံ တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Klyde သည်ရုရှား၊ တူရကီ၊ GCC နိုင်ငံများကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာတွင်နာမည်ကောင်းရနေသည်။ ဤတွင် CAMRY အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံး android ကား...
Klyde PX5 android 9.0 နှစ်ဆ din RAV4 2019-2020
Klyde PX5 android 9.0 နှစ်ဆ din RAV4 2019-2020 ဒီယူနစ် android 9.0 double din RAV4 2019-2020 on-board Octa-Core ပရိုဆက်ဆာနှင့်၎င်း၏ 32GB ROM မှတ်ဉာဏ်နှင့် 4G RAM နှင့်အတူ, သူကချောမွေ့ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ Multi-task...
2016-2019 အတွက် Land Cruiser အတွက် Android ကားရေဒီယိုအသံ
2016-2019 အတွက် Land Cruiser အတွက် Android ကားရေဒီယိုအသံ Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM...
Klyde Android 10 Camry 2014-2015 ကားဖျော်ဖြေရေး ဤ Klyde Android 10 Camry ကားဖျော်ဖြေရေးသည်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှုနှင့်ရေဒီယိုသတင်းနှင့်ရာသီဥတုသတင်းများ၊ တေးဂီတဖွင့်ခြင်းနှင့် APPs လည်ပတ်မှုများအတွက်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုပေးနိုင်ရန် Octa-Core...
Camry 2019 အတွက် Android9ကားမာလ်တီမီဒီယာရေဒီယို
Camry 2019 အတွက် Android9ကားမာလ်တီမီဒီယာရေဒီယို Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM -...
2016-2019 အတွက် Land Car Cruiser အတွက် Android ကား DVD player
2016-2019 အတွက် Land Car Cruiser အတွက် Android ကား DVD player Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency:...
တိုယိုတာ Harrier 2016-2019 အတွက် Android auto multimedia
တိုယိုတာ Harrier 2016-2019 အတွက် Android auto multimedia Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM...
Land Cruiser 2020 အတွက် Android 9.0 car dvd
Land Cruiser 2020 အတွက် Android 9.0 car dvd Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM - Samsung...
Toyota LC100 2005-2007 အတွက် Android9ကားရေဒီယို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 230 - 260 / Set/Sets
Toyota LC 100 GXR 2005-2007 အနိမ့်အဆင့်အတွက် Android9ကားရေဒီယို Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency:...
LC100 VXR 2005 အတွက် Android9ကားရေဒီယို
Toyota LC100 VXR 2005 အတွက် Android9ကားရေဒီယို Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM -...
2019 Corolla အတွက် Android system 10.1 "ကားသွားလာမှု
2019 Corolla အတွက် Android system 10.1
Toyota RAV4 2012-2015 အတွက် Android9ကားစတီရီယို
Toyota RAV4 2012-2015 အတွက် Android9ကားစတီရီယို OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM - Samsung 4GB DDR3 Nand Flash: 32GB Multi-touch screen...
တရုတ်နိုင်ငံ တိုယိုတာက Android ကား DVD ပေးသွင်း
1.KLYDE တစ်နှစ် 2008 ကနေကားကို DVD ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mian ထုတ်ကုန်ကို Android 6.0 စနစ်ကကားကို DVD ကစားသမားဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးထုတ်ကုန်တင်းကြပ်စွာအီး / FCC သည် / ROHS လက်မှတ်သည်နှင့်အညီ, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ကောင်းသောစျေးနှုန်း။ တိုယိုတာစီးရီးဘို့, ယခုတွင်ငါတို့သည် 6.2 '' တိုယိုတာတစ်လောကလုံးမော်ဒယ်များ, 6,95 '' တိုယိုတာတစ်လောကလုံးမော်ဒယ်များ, Avalon 2015-2016 တူသော7'' တိုယိုတာအထူးမော်ဒယ်များအပါအဝင် 40 ကျော်မော်ဒယ်များပေး; Avalon 2012, Sequoia 2015; COROLLA 2014; COROLLA 2012; RAV4 2006-2012; Yaris 2012-2013; Prado 2006-2010; Lander Cruiser 100, 8 '' Hilux 2016 နဲ့တူ '' တိုယိုတာအထူးမော်ဒယ်များ, Levin 2014; COROLLA 2006-2011; Camry 2012; Camry (ဥရောပ) 2012 ခုနှစ်, Camry 2007-2011; RAV4 2013; 2014 Yaris; PRADO 2010-2013; Prius 2009-2013; Land Cruiser ဟာ 200 2008-2012; 8 '' Camry 2015 နဲ့တူ '' တိုယိုတာအထူးမော်ဒယ်များ, COROLLA 2014; Alphard 2007-2013; PRADO 2014 Insight web studio ၏။ ,
2.we ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်ဤမော်ဒယ်များ 20000pcs တစ်ဦးချင်းစီ montn ထောက်ခံပါတယ်။ များစွာသောအခြားမော်ဒယ်များယခု underdeveloping နေကြတယ်, ကျနော်တို့ 4-5 မော်ဒယ်သစ်လစဉ်လတိုင်းထွက်လာကြပြီ, ငါတို့ဒီနှစ်နှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ output ကိုအသုံးရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဘေးမှာကျနော်တို့ 20 ကျော်မော်ဒယ်များ 10.1 လက်မ deckless ကားတစ်စီး DVD ကစားသမားဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အဘို့ကြီးသောဝန်ဆောင်မှုပေး။
3. 6.2`` တိုယိုတာက Universal ကားကို DVD Player./ 6,95 '' တိုယိုတာက Universal ကားကို DVD Player ကို။ / 7''Toyota က Universal ကားကို DVD Player./ 7''Toyota အထူးကားကို DVD Player./ 8''Toyota အထူးကားကို DVD Player./ 9''Toyota အထူးကားကို DVD Player ကို။ /10.1''Toyota အထူးကားကို DVD Player ကို။
တိုယိုတာက Android ကား DVD တိုယိုတာ Camry က Android ကား DVD တိုယိုတာက Android ကား DVD 5.1.1 တိုယိုတာက Android 4.2 ကား DVD တိုယိုတာက Android ကားကို DVD